ISTANFORD YAYIKHE YANOBUHLE, IIDOLA EZINGAMA-500,000 ZEEWOTSHI EZIQINGQIWEYO/UMTHOMBO UHLALA NGOKUTYIBILIKAYO KWINDAWO YOKUGCINA-IINDABA ZEMERCURY - IINDABA
IStanford yayikhe yanobuhle, iidola ezingama-500,000 zeewotshi eziqingqiweyo/umthombo uhleli ngokutyibilikayo kwindawo yokugcina
Ixesha limi ngxi kwiSicwangciso esiqingqiweyo seDyunivesithi yaseStanford esaziwa kakhulu, i-500,000 yeedola zewotshi kunye nomthombo womyili wodumo uMaya Lin.
Xa yatyhilwa kwiSayensi Quad yesikolo ngo-2000, ngehlombe elikhulu, kwabonakala ngathi linyathelo lobunjineli. Amalungu alungelelaniswe ngononophelo kwilitye lesikhumbuzo legranite elineetoni ezili-16, elintywiliselwe emanzini, liphawulwe ngokuchanekileyo kwiinyanga, iintsuku kunye nemizuzwana kuMgangatho wePasifiki, kukukhanya kwemini yePasifiki kunye namaxesha eHlabathi liphela.
Kodwa ngoku, ihleli kwindawo yokugcina - ubuchwephesha bayo obuntle bumiswe kukurhwalala nokungakhathali - ayithethi xesha kwaphela.
Akukho nto injalo emhlabeni. Intle kakhulu, yolunye uhlobo lokwenene, uKevin Binkert uthe ngewotshi eyayisebenza phantsi kweshiti lamanzi - into eyodwa ethe ekugqibeleni yangqina ukupheliswa kwayo. Ingcaphephe yewotshi esekwe eSan Francisco kunye nengcali yoomatshini, uBinkert uqeshiwe ukuba ancede axilonge ixesha lelitye elikhulu, elime iimitha ezili-10 ububanzi.
Kodwa lirhamncwa eliethe-ethe, watsho.
Umsebenzi wenzelwe ukuba ube kukucamngca kwingqikelelo yexesha kwihlabathi elicuthwe kukufikelela ngoko nangoko kwi-Intanethi. Yayingumsebenzi wokuqala woNxweme oluseNtshona nguLin, igcisa elisekelwe kwisiXeko saseNew York elaziwa ngokuyila udonga lwaseWashington, D.C. oluqinileyo lweVietnam Veterans Memorial xa wayesengumfundi onesidanga eYale.
Umfanekiso oqingqiweyo wewotshi wenziwe ngegranite emnyama ejikajikayo kwisiseko esingalinganiyo esijikelezayo kanye ngonyaka kwaye sasihamba rhoqo iiyure ezingama-24 ngosuku. Ukuyixhasa, kunye nokudala umgangatho ogqibeleleyo we-slab enzima, iStanford yatshonisa iikholamu ezintlanu zekhonkrithi nzulu emhlabeni.
Ixhaswe ngumbane, yahamba ngenkqubo yomatshini kunye nezixhobo eziqhelekileyo ezifakwe emanzini ahambayo, ngokutsho kukaSusan Roberts-Manganelli, umphathi wengqokelela yeZiko leCantor le-Visual Arts yaseStanford.
Amanani amagqabi eplatinam ayecatshulwe etyeni. Ukusuka emngxunyeni ongekho embindini, amanzi ayezele, atyhutyha umjikelezo wawo, akhukuliswe ngecala lawo aze athontsize kumandlalo wamatye agudileyo.
Ixesha alilungiswanga kakhulu, utshilo uLin kumsitho wokuvula, apho irebhoni yasikwa ngumxhasi uHelen Bing. Inxulumene nendawo okuyo ehlabathini. Yingcamango engabonakaliyo.
Kwaye kunzima kakhulu ukulinganisa rhoqo - ngakumbi xa kubandakanyeka amanzi, isinyithi, iibhodi zokutyibiliza, iibhayisekile zeentaba kunye neetoni zegranite.
Nawuphi na umthombo ufuna ingqwalasela eninzi, wachaza injineli yoomatshini u-Said Shakerin weYunivesithi yasePasifiki, umbhali wephepha lika-2005 leMithombo Yamanzi Ngeziphumo Ezikhethekileyo, epapashwe kwiphephancwadi i-American Scientist.
Kodwa le yayiyeyona ndlela yokuqala yehlabathi yokuntywiliselwa emanzini ngokupheleleyo, utshilo uShakerin, otyelele iTimetable kabini. Yaye amanzi ayindawo edlayo.
U-Lin, ongazange aphendule kwisicelo sodliwano-ndlebe, kuthiwa udibane neenjineli kunye neengcali zekhompyutheni, kuquka nomsunguli we-Apple uSteve Jobs. Yakhiwa ngoncedo lwabakhandi bewotshi, iingcali zesiseko kunye nomenzi we-turntable.
Ukuhlolwa kwindlela yewotshi kwenziwa kabini ngonyaka, ngokutsho kukaShakerin. Umthombo wawucocwa qho ngenyanga.
Kodwa izinto eziqingqiweyo azizange zimelane nokubola, okanye zitywinwe ngokwaneleyo emanzini, ngokutsho kwemithombo engazange ichaze igama. Ayaziwa ukuba i-Lin ifake iwaranti ekusebenzeni kwayo.
Ukwenza izinto zibe mbi ngakumbi, ii-skateboarders kunye ne-mountain bikers bakhwela kuyo, bebangela umonakalo. Ababukeli abanomdla babamba izandla zayo. Umbhobho wamanzi owaphukileyo ongaphantsi komhlaba ube negalelo ngakumbi kwiingxaki zawo.
Izakhono ezinqabileyo ezifunekayo
Isicwangciso samaxesha azange sigcine ixesha kakuhle kakhulu. Ukuze siqhubeke sisebenza, isikolo siye salungisa izinto ezithile kwindawo leyo. Ngokomzekelo, xa inkqubo ye-flip-ring yasilela, kwaye umbane ucimile, kwathatyathelw’ indawo yintambo yangaphakathi. Kodwa yayidinga minyaka le - ngaphantsi kwamanzi - ukukhulula.
Kangangexesha elithile, xa yayiyekile kwaphela, iTimetable yaba yeyona bhentshi intle nebiza kakhulu esikolweni.
Ngoku iTimethebhile ikwindawo yokugcina njengoko siphanda isisombululo sexesha elide ekusebenzeni kwayo, utshilo umakhi wezakhiwo waseStanford uDavid Lenox. Siphanda indlela yokulungisa i-mechanics yeqhekeza.
Iqela labantu abane - eliqulunqwe ziingcali kwiziseko, ilitye, isayensi yezinto eziphathekayo - sele iqalile uphononongo olunokwenzeka lokuhlola ukuba kunokwenzeka ukulungisa. U-Binkert, umseki we-Standard Metal Products machine shop, uya kukhokela iqela. Injineli eyazifundisayo kunye noomatshini abanepenchant yeeprojekthi zohlobo olulodwa, uBinkert walungisa i-Oakland Tribune's Tower Clock kunye nezinye iiwotshi zamaxesha ngoomatshini, esebenzisa izakhono eziphantse zinqabile njengewotshi ngokwazo.
Yiprojekthi eyoyikisayo, utshilo uBinkert. Yonke inkqubo iphantsi kwamanzi. Zeziphi izinto ekufuneka sizisebenzise ukunqanda ukuthotywa kwegalvanic? Sibazisa njani abantu ukuba abafanele bakhwele kuyo?
Inkulu kakhulu kangangokuba ibonakala yomelele, utshilo. Kodwa iphinda iphawule imizuzwana-kwaye ithambile kakhulu.
Qhagamshelana noLisa M. Krieger kwi-408-920-5565.
Imigaqo-nkqubo kunye neMigangatho